Global Voices teny Malagasy » Pero: voakarama hitarika ny ekipa nasionalin’ny baolina kitra i Markarián · Global Voices teny Malagasy » Print
Pero: voakarama hitarika ny ekipa nasionalin'ny baolina kitra i Markarián
Voadika ny 08 Aogositra 2010 20:25 GMT 1	 · Mpanoratra Gabriela García Calderón Nandika miora
Sokajy: Amerika Latina, Però, Fanatanjahantena
Tsy nahita ny ekipa nasionalin'ny baolina kitrany nandray anjara tamin'ny fiadiana ny amboara eran-tany FIFA  nandritra ireo 28 taona lasa ireo Peroviana. Lasa ekipa gisitra tamin'ireo ekipan'i Amerika Atsimo ity ekipa ity nandritra ny fifantenana tamin'ity fiadiana ny Amboara eran-tany 2010 ity tany Afrika Atsimo. Tany amin'ny voalohandohan'ny volana Jolay tany, nanambara ny Federasion'ny baolina kitra Peroviana fa voafidy ho mpampiofana vaovao ilay Orogoayana” Sergio Markarián . Miresaka mikasika ireo vaovao mikasika ity lehilahy voafidy hanova ny vintan’ ny ekipa izay niatrika fifaninanana maro vao haingana teo .
Ny mpitoraka blaogy Luis Vigil Dávila, avy ao amin'ny blagy Mejor Hablar de Ciertas Cosas [es] [Tsara ny miresaka mikasika ireo zavatra sasany], hanoratra mikasika ny fahaizan'ity mpampiofana ity :
Araka ny efa fantatrao, ity ‘Mago’ malaza ity [Ilay mpanao majika], izay amin'izao dia manazatra ny ekipan'ny Anjerimanontolo sy ny Sporting Criytal, niaraka tamin'ity farany izay resy tamin'ny famaranana ny Fiadiana ny Amboaran'ny Libertators tamin'ny taona 1997, dia nokendren'ny Federasiona ho mpisolo ny mpampiofana José del Solar .
Ny Fútbol peruano – Fulbito y Fulvaso, izay ny mpanoratra ao amin'izany dia milaza ny tenany ho “mpankafy baolina kitra izay tsy mila ho lasa manam-pahaizana”, naneho [es]  ny fanantenana fara-tampon'ireo mpankafy baolina kitra Peroviana tamin'ny fanendrena an'i Markarián:
Ity marika vaovaon'ny mpampiofana ny ekipa nasionalin'ny baolina kitra Peroviana ity, Sergio Markarian, niteny fa hanao izay tratry ny heriny izy amin'ny hampidirana an'i Pero ho anisan'ireo voafidy amin'ny Fiadiana ny Amboara eran-tanin'ny FIFA any Brezila amin'ny taona 2014 ary nanampy fa manantena fahalavorariana ho vokatra tsara indrindra tamin'ny asany hatramin'izay izy.
Na dia izany aza, tsy afaka manatanteraka ity tanjona ity irery i Markarian, ary tokony hahatoky ny fandraisan'ireo mpilalao Peroviana izy. Hahazo ny anjarany voalohany izy amin'ny 4 Setambra rehefa hifanandrina amin'ny Kanada ity ekipa ity amin'ny lalao firahalahiana. Ny blaogy Otras Tardes [es] dia namoaka ny anaran'ireo mpilalao  izay nofidian'i Markarian amin'ity lalao ity. Avy amin'ilay blaogin'ny vondrona Alianza Lima Corazón [es] , mifototra amin'ny mpilalao “vahiny” , dia ireo Peroviana milalao any ivelany amin'ny ekipa malaza any ivelany:
Ny “Mago” dia maneho ny fahazotoany hanomboka amin'ny ekipa nasionaly . “Tsy afaka miandry ela aho, Te-hanomboka hiaraka amin'ireo mpilalao efa hitako aho ary ny fotoana no hilaza izany”. Niteny i Markarián fa tsy afaka miankin-doha amin'ireo vahiny izy amin'ny fanazarana. “Amin'ny fampiantsoina fanintelony, hanana ireo vahiny isika,” hoy ihany izy.
Isaky ny misy mpampiofana karamaina hitarika ekipa nasionaly, tsy azo lavina ny fanontaniana mikasika ny fiakaran'ny karamany. Martín Beas Nuñez ao amin'ny blaogy Pregunta [es] nanontany “fa ahoana i Sergio Markarián no hahazo vola mitentina US$760,00 mandritra ny taona iray? ,” ary namaly ireo mpamaky:
Fantatro fa mety ho sehatra ikorianan'ny vola mampihoam-pampana ny baolina kitra, kanefa raha mitsinjo lavidavitra kokoa, raha handoa ny karaman'i Sergio Markarian ny FPF (Federasion'ny Baolina Kitra Peroviana), iza no manaiky fa LASA LAVITRA amin'ny ZAVA-MISY izy izany? (Na dia tsy handoavana ny karamany aza ny hetran'ireo Peroviana, tsy mbola ho difotra ihany ve isika?)
Amin'ny hatevim-bola lany amin'i Markarián, maro ireo mino fa hiakatra kokoa ny fanantenana. Javier Paredes (@javierparedes) “no iray amin'izany “:
Maro ireo fandokafana an'i Markarian, tsy te-hieritreritra ny ho tenenin'ny media aho rehefa ho resy amin'ireo lalao telo mifanesy i Però.
Raha atotaly, manantena an'i Sergio Markarian ny maro amin'ny mpankafy baolina kitra Peroviana noho ny maha mpampiofana nasionaly azy . Ny fotoana irery ihany no afaka miteny raha tena afaka manao majika marina araka ny anaram-bosotra nomena azy ity Orogoayana ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/08/08/8102/
 Tsy nahita ny ekipa nasionalin'ny baolina kitrany nandray anjara tamin'ny fiadiana ny amboara eran-tany FIFA: https://globalvoicesonline.org/2010/06/11/peru-watching-the-world-cup-from-afar
 Sergio Markarián: http://en.wikipedia.org/wiki/Sergio_Markari%C3%A1n
 ekipa izay niatrika fifaninanana maro vao haingana teo: http://en.wikipedia.org/wiki/Peru_national_football_team
 hanoratra mikasika ny fahaizan'ity mpampiofana ity: http://luizcore.wordpress.com/2010/07/02/sergio-markarian-sera-el-nuevo-tecnico-de-la-seleccion-peruana/
 José del Solar: http://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_del_Solar
 naneho [es]: http://fulbitoyfullvaso.blogspot.com/2010/07/comienza-la-era-markarian-y-el-peru.html
 dia namoaka ny anaran'ireo mpilalao: http://www.otrastardes.com/2010/07/30/los-convocados-por-sergio-markarian-para-seleccion-peruana
 Alianza Lima Corazón [es]: http://www.alianzalimacorazon.com/2010/07/markarian-ya-no-puedo-esperar-mas.html
 fa ahoana i Sergio Markarián no hahazo vola mitentina US$760,00 mandritra ny taona iray?: http://pregunta.pe/sergio-markarian-sueldo/
 “no iray amin'izany: http://twitter.com/JavierParedes/status/20473810277